Annagoo Taleex Naal
Nin la odhan jiray Carab Dheere oo kibir tadhahay, Goboladda Waqooyi wax Alla wixii uu doono ka sameeyay Ingiriiskuna baardaajinayey, ayaa waxaa la wariyey in wiil u yimid oo weydiistay gabadh ay walaalo ahaayeen. Carab ayaa weydiiyey wiilkii oo "maxaad ku falaysaa gabadha?" Waan guursanhayaa ayuu wiilkii ku jawaabay. Carab ayaa asgartiisii faray inay wiilkii toogtaan. Sidii bay yeeleen oo wiilkii rasaas huwiyeen halkaana qudha uga qaadeen.
Niman odayaal ah oo gardarada ninka miskiinka ah loo toogay la yaaban ayaa Carab Dheere weydiiyey sababta uu wiilka u toogtay wuxuuna ku jawaabay: ninka anigoo Carab Dheere ah, oo maanta jooga, wixii aan doonana samayn kara, il-adaygiisa intuu ii yimid walaashaa aan guursado ee isii yidhi, barrina anigoo igu odhan doonaa aan "ku waso!" Intaa ayuu wiilku qoonsaday ayuu odayaashii ugu jawaabay. Wax la filayey dhaqanka Soomaaliyeedna lug ku leh ma aha, Carabse wuxuu ahaa nin asiib wado. Odayaashii af-kala qaad iyo amakaag ayey kala soo tageen goobtii.
Intaasi markay saa u dhacday ayaa waxaa suuqa Burco ku kulmay Ismaaciil Mire oo maqashiisan falaadxumada uu Carab ku kacay iyo Carab Dheere. La is nabdaadi oo la kala war qaaday. Carab ayaa dabadeed Ismaaciil ku yidhi: Ismaaciil waa digii gabyi jiraye maad gabaydid maanta? Ismaaciil ayaa yidhi waan gabyi ee in aan amaan kaa heli doono oodan waxba i yeelaynin ii balan qaad. Hawraarsan iyo hala yeelo ee bal gabay ayuu Carab ku jawaabay. Haddaba abwaanku goobtaa ayuu ka tiriyey gabaygan caanka ah ee Soomaalida badankeedu maqashay. Wuxuu yidhi:
Kulligood adoomaha rabboow qaybsha kibistiiye
Ninba kadabkii loo qoray Illaah wuu la kulansiine
Kulligiiba Reer Hagar anaa kiin ah baa rogaye
Misna kama fileyn mana hadayn kii Israa'ilaye
Kashiisaba ma gelin wiilalbaa keebka kuu qabane
Waxse kadabkii go'ay maalintuu kaday raggiisiiye
Ka shib dhaha Islaamoow naftii kii ladnaa gadaye